I-Bitcoin Bouncing From Bull Market Support Points Iya Ku-2021 Njengonyaka We-Crypto | ICoinGenius Ibamba Umcimbi we-Virtual Crypto
Intengo yeBitcoin isanda kwehla isuka ku- ngaphezulu kwama- $ 12,000 kuma-2020 aphezulu ukuya emuva ngaphansi kwe- $ 10,000. Kepha ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa eziqondile zokuphinda uzame ukumelana kuphenduke ukusekelwa, impahla ye-crypto isivele ibuyele ku- $ 11,000 futhi ikhuphuka.
Ukuqhuma kwezikhathi ezibekiwe zamasonto onke, kwenzeka nje lapho kwenziwa ukufundwa okuthile kwi-Relative Strength Index ukuthi kuwo wonke umlando weBitcoin usebenze njengokwesekwa kwemakethe yezinkunzi. Uma ileveli esemqoka iqhubeka nokubamba, u-2021 kuzoba unyaka wokubuyiswa kwe-crypto.
I-Bitcoin Bear Market Ingaphela Ngalesi Line One Esiphethe Izikhathi Zamasonto Onke
Umhlaziyi we-Crypto udabukile uma imakethe yezinkunzi zeBitcoin ikhona noma cha. Abakholelwa kumodeli yesitoko sokugeleza banesiqiniseko sokuthi njengoba manje ukwahlukaniswa phakathi bekungokwedlule, kuya emijahweni futhi kuphela isikhathi ngaphambi kokuthi amanani enyuke.
Abanye babhalisela a imfundiso yokuzungeza eyandisayo, lokho kusho ukuthi iBitcoin inokuhlanganisa okuningi ukukwenza, futhi ingahle isethe ukwehla okusha lapha. Isimo esinjalo singaqeda noma yiliphi ithemba lokuqamba kabusha imodeli yesitokwe kuya kokugeleza futhi lingahle lidayise ngokweqile.
Ukufunda Okuhlobene | Lawa Mazinga Akhiye Namadethi Angavimba I-Bitcoin's Stock-To-Flow Model
Kepha amasiginali amaningi aya esekela umbono wokuthi imakethe entsha yezinkunzi iyaqala. Le mbono ibuye ixhaswe ukuxhaswa kwe-RSI kwamasonto onke kumashadi wamanani we-BTCUSD abambelele ekufundweni kwama-55, njengoba nje nempahla yenzile ngesikhathi sokugijima kwezinkunzi ezedlule.
I-BTCUSD Weekly Relative Strength Index 55 Ukusekela Ukubamba | Umthombo: UkuhwebaBuka
Amandla Ahlobene Namandla Inkomba Yezinyathelo Zokuqina Kwamandla, Umfutho, Izimo Ezithengwe Kakhulu Nezingaphezulu
The Isihlobo Amandla Inkomba iyithuluzi lokulinganisa lomkhuba namandla. Lapho ithuluzi lifinyelela ngaphezu kwama-70 noma ngaphansi kuka-30, likhombisa ukuthi impahla ibizelwe ngokweqile noma ibekwe ngokweqile ngokulandelana.
Kepha lezo akuzona ukuphela kwezinombolo ezizwakalayo ku-RSI. Ngezikhathi ezibekiwe zamasonto onke kumashadi wamanani we-BTCUSD, ukufundwa kwama-55 ku-RSI kube nokubaluleka kuyo yonke impilo kaBitcoin.
Ulayini usebenza njengokwahlukanisa phakathi kwezimakethe zebhere nezenkunzi, futhi lapho impahla ephezulu ye-crypto ibambe ngaphezu kwalowo mugqa, imvamisa isho ukugijima kwenkunzi kuvuliwe.
Ukufunda Okuhlobene | I-Bitcoin Ifinyelela Emavikini angu-144 Kusuka Kuzo Zonke Izikhathi: Kungani Le Ndaba Ibalulekile
Intengo yeBitcoin isanda ukubuya kanzima, ngqo kusuka kulelo zinga elibalulekile ku-RSI, futhi kungasho ukuthi impahla ye-crypto ngokusemthethweni iqinisekise imakethe entsha yezinkunzi.
Uma umlando uphinda, lowo mugqa kufanele ubambe ukusuka lapha kuye phambili, noma ngabe ukulungiswa kukubi kanjani. Uma umugqa ulahleka, noma kunjalo, ungabuyela emikhombeni yemakethe yebhere yeBitcoin nayo yonke i-crypto.
Izihloko ezihlobene:2020Isikhathi Sonke EsiphezuluumhlaziyiibhereBitcoinblockchainBTCUSDcryptoifa le-cryptoBAKHALAUkwenza i-halvingUmlandoBambaUkubambaJULANIMarketMarketsnewONEInaniamananiukubuyaUkuhamba-kuya-KugelezatopUkuhwebaBukamkhuba
I-XRP Bulls Reclaim Key Level, i-Ripple Ilungiselela Umsebenzi Wenyanga
UJack Dorsey: I-Bitcoin "Yakhiwa yiwo wonke umuntu"
Iqembu laseJapan Giant SBI Lethule Isevisi Yokubolekwa Kwe-Crypto YeBitcoin
Izizathu Ezinhlanu U-Ethereum Ungene Emakethe Entsha Yezinkunzi
Isikhulu Esiphezulu seCoinbase Sesaba Imithetho Ehlehlisiwe Ephakanyiswe Abaphathi BakwaTrump
UNdunankulu waseRussia uhlongoza ukuqondisa ngqo ukuthuthukiswa kwemakethe yendawo ye-crypto
But there is one positive metric on the exchange – trading volumes. According to Isikhungo Sethokheni, Uniswap trading volumes have remained steady during this period.
The financial metrics provider compared Uniswap’s liquidity loss and its trading volume, sharing the findings via a Twitter intambo.
Isungulwe e1999, iSBI Group iyinkampani yezinsizakalo zezezimali ezinze eTokyo, eJapan. Ngaphandle kokunikeza izinsizakalo eziningi zezimali zendabuko, inkampani ephethwe yiSoftBank Group imemezele namuhla umzamo omusha ohlobene ne-cryptocurrency.
I-SBI Group yethule insizakalo yokubolekwa kwempahla yedijithali ngengalo yayo ye-cryptocurrency - i-SBI VC Trade.
The isitatimende waziswe ukuthi ipulatifomu, ebizwa nge-VC Trade Lending, izokweseka i-Bitcoin kuphela. Kodwa-ke, izinhlelo zifaka ukwengeza ukusekelwa kwe-Ether (ETH), Ripple (XRP), nezinye izimpahla ze-cryptocurrency.
Imali yamakhasimende ingahluka kusuka kubuncane be-0.1 BTC kuye kubukhulu be-5 BTC. Ngemuva kokuboleka ukubanjwa kwabo kwe-bitcoin epulatifomu, amakhasimende azothola inzalo ye-1% ngezintela ezifakiwe.
Isimemezelo siphinde sachaza ukuthi i-VC Trade Lending izokhokhisa imali kuphela ngokukhipha imali yen yen yaseJapan. Imali ye-Cryptocurrency ne-yen, kanye nokuphathwa kwe-akhawunti noma ubulungu bonyaka, ngeke kube ngaphansi kwemali ekhokhwayo.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-SBI Group ibike yabandakanyeka kwamanye amaphrojekthi ahlobene ne-cryptocurrency phambilini. Eminyakeni embalwa eyedlule, isiqhwaga sezezimali umkhankaso Ukushintshaniswa kwemali yaseJapane kokuqala okusekelwa yasebhange. Muva nje, iSBI Group yaqasha abadlali ababili abangochwepheshe be-e-sports futhi zikhokhwe kubo ku-XRP.
I-Ethereum njengamanje ihoxisa kakhulu kusuka kwinani eliphakeme langaphambilini nezinyanga ezingama-30 ze- $ 620. Ngisho nokwehla okungaba ngu- $ 100 kuzintengo zanamuhla zama- $ 525, i-ETH isakhuphuke ngaphezu kwama-300% kusukela ekuqaleni konyaka.
I-genesis eqinisekisiwe ye-Beacon Chain ebilindelwe isikhathi eside, okuyiSigaba 0 sokuthuthuka okulindelwe kakhulu kwe-Serenity ETH 2.0, ngokungangabazeki umfutho oqhutshwa kepha akuyona ukuphela kwephuzu elinamandla le-Ethereum.
Izizathu ezingaphezu kwezi-5 zokuba yiBullish ku-Ethereum
U-Spencer Noon we-DTC Capital ukhiphe amashadi ambalwa asemqoka ukusekela umbono wokuthi nakanjani sisezinkulungwaneni ze-Ethereum.
Izimpawu eziyi-8 sesifake okusha $ ETH imakethe yezinkunzi 👇🏼
- ISpencer Noon (@spencernoon) November 25, 2020
Amakheli asebenzayo kunethiwekhi ayimethrikhi yokuqala njengoba manje ingaphansi nje kuka-500,000 ngosuku. Lokhu kucishe kuphindwe kabili kunalokho okwakuyikho ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Ngokuya ngezimali ezikhokhelwe, u-Ethereum ufinyelela konke okuncane esikhaleni se-crypto ngegesi eyi-80 billion manje esetshenziswa nsuku zonke. Umhlaziyi ubabaze ukuthi lokhu;
"Uphawu olucacile lokuthi iyinethiwekhi elusizo kakhulu emhlabeni."
Sekukhishwe imali engaphezulu kwezigidigidi ezingama-16 zama-solidcoins ku-Ethereum, okuyisibalo esihambisane nomqondo selokhu kuqale lo nyaka okuwuphawu lokuthi kunesidingo esikhulu samadola edijithali.
Umphumela weDeFi ube mkhulu njengoba, yize izimbangi eziningi kanye 'nababulali' bevelile kulo nyaka, u-Ethereum uhlala eyisisekelo sayo yonke imvelo. Icala elikhulu lokusetshenziswa kuka-Ethereum selihambile njengoba manje sebenabasebenzisi beDeFi abaphindwe kayishumi kunangonyaka odlule.
Inani eliphelele elikhiyiwe ngaphesheya kwe- Isikhala se-DeFi kukhuphuke cishe i-2000% selokhu kuqale u-2020 ukufinyelela ku- $ 14 billion ngezigidigidi eziyisihlanu zamadola kanye nezinqubo okuyizinkomba zokuthi isikhala siyavuthwa.
Futhi Kukhona Okuningi…
Inani leBitcoin elinikwe ithokheni ku-Ethereum nalo lisezingeni eliphakeme kakhulu nge-152,000 BTC, noma i- $ 2.7 billion ebiza amanani entengo anamuhla asongwe kunethiwekhi ye-Ethereum.
Umphumela we-DEX awunakushaywa indiva njengokushintshaniswa okwabelwe amandla e-Ethereum okwenze u- $ 20 billion ngevolumu ezinsukwini ezingama-30 ezedlule. Lokhu kulethe inani labo elihlanganisiwe laba ngama- $ 86 billion kulo nyaka;
"Uphawu lokuthi ama-DEXs angancintisana nezindawo zokuhwebelana eziphezulu."
Njengoba kubikiwe I-CryptoPotato, Imizwa yomphakathi ka-Ethereum nokuseshwa nakho kutholakala amazinga aphakeme kakhulu kusukela ekuqaleni kuka-2018 njengoba imithombo yezindaba ejwayelekile kanye noquqaba luqala ukunaka.
Lokhu kudonswa kwakamuva kungahle kube ngaphansi kwama- $ 500, kepha akukho kungabaza okuncane ukuthi kuzohlinzeka ngendawo yokuthenga ye-ETH okusasele indlela ende yokuhamba.
Blockchainamahora 16 edlule
I-Think Tank eseLondon Ithi Ipulatifomu Yokuthumela Imali ye-Ripple ye-Ripple inganciphisa abaxhumanisi futhi ikhulise ijubane lezinkokhelo zamazwe omhlaba
BlockchainIzinyanga 6 edlule
Ungayithola Kanjani i- 'Third Wave' Yezimali Zomhlaba waseCannabis